Mmalite na akụkọ ifo ndị Gris nke Ixion na anyanwụ nke 22º | Netwọk Mgbasa Ozi
N’oge gboo, e nwere ọtụtụ ndị mmadụ gbalịrị ịkọwa ụfọdụ n’ime ihe ịtụnanya kachasị ịtụnanya na ụfọdụ ihe gbasara ihu igwe. Maka nke a, o nyere nkọwa na ihe kpatara mbido ihu igwe na ihe okike bụ omume ụfọdụ chi ndị a na-akọ n'akụkọ ifo. Chi ndị a na-eme ụwa ụmụ mmadụ ebumnuche. Ọkachamara onye Italia na-ahụ maka ịkọwa 22º halo na akụkọ ifo ndị Greek. Onye ọkachamara Italiantali nke chọpụtara ya a na-akpọ Paolo Coloma ma mara ya Ixion.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile na akụkọ ọdịbendị sitere na Ixion.
1 Nye bụ Ixion?
2 Akụkọ ifo nke Ixion na halo
3 Etu esi guzobere halo
Nye bụ Ixion?
Ixion bụ eze akụkọ ifo nke Thessaly onye nwere aha ọma dịka eze ọjọọ. Ọ bụghị naanị na ọ bụ ajọ eze, mana ọ bụkwa ajọ mmadụ. Ọ lụrụ Dia onye bụ nwa nwanyị Eioneus, mana e leghaara ịkwụ ụgwọ nke onyinye ndị ekwere na ala ọhụrụ ya anya. N'oge ahụ, e nwere omenaala ọ na-abụ inyekwa nne na nna onyinye n'oge agbamakwụkwọ ahụ. Eziokwu ahụ bụ na Ixion anaghị ahapụ ndị ọgọ ya n’oge agbamakwụkwọ ahụ kpatara ọgụ. Ihe si na ọgụ ahụ pụta Ixion na-atụba Eioneus n'ime olulu na-ere ọkụ nke nkụ.
N’ịbụ onye eziokwu dị otú ahụ chere ihu, ọ dịghị ndị Greek a ma ama ga-adị njikere ịgbaghara mpụ Ixion. N'ikpeazụ, Chineke Zeus n'onwe ya nwere ọmịiko ma kpọọ ya ka ọ gaa Ugwu Olympus maka ịdị ọcha ya. Mmebi iwu ezughi oke maka ihe ọjọ nke Ixion nwere. Ozugbo ọ nọ na Olympus, bụ ebe chi ndị Greek, ọ kwụghachiri mmesapụ aka nke Zeus na mbọ ya na nwunye ya Hera. Ebe ọ bụ na Zeus maara ihe nke ukwuu, ọ bịara nwee ike ịmata atụmatụ ọjọọ ya wee mepụta atụmatụ. Site n'ike ya, ọ gbanwere ígwé ojii a na-akpọ Nefele ma nye ya ihe yiri Hera.. Njikọ njikọta mepụtara Centaurus onye bụ Nna nke Centaurus.
Ntaramahụhụ nke Zeus nwetara Ixion dị egwu ma na-adịru ebighi ebi. O nwekwara ike ịchọpụta ebumnuche ọjọọ niile megide Hera. Zeus nyere Hermes iwu ka ọ na-ahụ maka ijikọ aka na ụkwụ Ixion iji dọba ya na wiil nwere nku ọkụ ka o wee nwee ike ịpịgharị na mgbe ebighi ebi.
Akụkọ ifo nke Ixion na halo
Dịka anyị kwurula na mbụ, akụkọ mmalite niile nke akụkọ ifo nke Ixion sitere na ụdị ihe okike na-enweghị ike ịkọwa. Offọdụ n'ime ọdịdị nke ihe ndị sitere n'okike dị ka halo nke ogo 22 dịkarị na Gris. N'okwu a, agba ọkụ a na-ewere ọnọdụ n'oge oge mmiri ozuzo na-agbagwoju anya na akụkọ ifo na-ewere ọnọdụ. Na Gris oge ochie enwere akụkọ ifo nke kọwara mbido ihe a.
Nyere akụkọ anyị kwurula banyere akụkọ ifo ndị Greek nke Ixion gosipụtara na Zeus n'onwe ya tara ya ahụhụ bụ mmalite nke ogo ogo 22. A kọwaara ya na Paolo Coloma, onye Italiantali nke ọkachamara na akụkọ ifo ndị Greek, kwadoro na mbido nkọwa nke ihe a bụ na ọ bụ Ixion na-agbanye ụkwụ na-enwu ọkụ dị ka ntaramahụhụ Zeus.
Iji kọwaa njikọ kachasị ukwuu site n'akụkọ ifo ndị Gris, Paolo na-arụ ụka na ogo nke 22 na-eso anyanwụ ma na-ahụ ya mgbe ụfọdụ ruo awa ole na ole. Site na oke uhie enwere ike iwere ya dị ka a ga-asị na ọ bụ mgbanaka ọkụ.
N'aka nke ọzọ, n'akụkụ nke akụkọ ifo a, a na-ejikọkwa ogo ogo 22 na Nefele, igwe ojii gbanwere. Ọnọdụ njikọ dị n'etiti Ixion na Nephele dị n'eluigwe n'ihi na ọ bụ ebe Zeus na Olympus. Na ọdịnala tupu akụkọ a, a na-ekwu na ụbọchị tupu ntaramahụhụ bụkwa ice. A kọwara ụkwụ na-ere ọkụ ka ọ na-efe n’eluigwe ruo mgbe ebighị ebi.
Akụkọ ifo niile a metụtara mmiri ozuzo ebe ọ bụ na ọdịdị nke halo a na-abụkarị ihe mmalite nke ihu ọkụ na-abanye na ọdịda.
Etu esi guzobere halo
Ugbu a, anyị ga-akọwa etu mbido anyanwụ sitere na sayensị ma ọ bụghị site n'akụkọ ifo. A na-akọwa ihe ahụ dịka gburugburu gbaa gburugburu n’anwụ, na-eme n’ebe oyi. N'etiti ha, na-adịkarị na Russia, Antarctica, ma ọ bụ n’ebe ugwu Scandinavia. Ọ na-adịkarị mgbe ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mma maka nhazi ya. Ya mere, ha nwekwara ike ime na ebe ndị ọzọ. Ihe mejuputara ya bu akuku ice ndi no na nkwusi na mpaghara nke kachasi elu nke troposphere. Mgbe ìhè anyanwụ dara na akpụrụ mmiri ndị a, ha na-enwupụta ìhè ma na-eme ka ụdị dum dị iche iche hụ.
Mmetụta a hụrụ site na halo yiri nke egwurugwu. Enwere ike ịkpọ ya dị ka egwurugwu okirikiri nke ihe e ji mara ya bụ isi. Iji mee ka ọnọdụ ọkụ ha daa n'akụkụ ọzọ nke ụwa, a chọrọ ebe ndị oyi na-adịkarị ala. Ga-adị kwa ọdịiche dị elu na okpomọkụ site na ala na okpomọkụ nke elu. N'ụzọ nke a, enwere ike ịnwe kristal akụrụngwa zuru oke na elu nke na-elekọta refracting ìhè ka e wee nwee ike mejupụta halo. N'ebe ụfọdụ ebe okpomọkụ dị elu, a gaghị ahụ ihe ọhụụ a ma ọ bụ na ọ dị mkpụmkpụ.
Ọdịiche dị elu nke dị na ọnọdụ okpomọkụ n'ụtụtụ bụ ihe na-eme ka ọdịdị halos a pụta. N'ụtụtụ, ikuku na-ajụkarị oyi n'ihi na ọ naghị enwe okpomọkụ sitere n'anyanwụ n'abalị ahụ dum. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị mere m ji agba ugboro ugboro n'ụtụtụ. Ihe ọzọ achọrọ bụ na ụdị igwe ojii nke dị na mbara igwe n'oge ahụ bụ ígwé ojii cirrus. Ma ọ bụ na igwe ojii ndị a na-etolite site na obere kristal akpụrụ mmiri bụ ihe na-erite na usoro ntụgharị uche na ntụgharị ọkụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mbara igwe na akụkọ ifo nke Ixion.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ixion
Ụyọkọ kpakpando ndị na-adịghị mma